အငယ်တန်းထုတ်လုပ်ရေးဒီဇိုင်နာ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » အငယ်တန်းထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်နာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘော်စတွန်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုအသင်း join ဖို့အငယ်တန်းထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်နာရှာကြ၏။
တစ်ဦးအငယ်တန်းထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်နာအဖြစ်, သင်စာမျက်နှာများ, အီးမေးလ်များ, display ကိုကြော်ငြာနှင့်အမျိုးမျိုးသောလူမှုရေးမီဒီယာပစ္စည်းများလေယာဉ်ဆင်းသက်, sites များအတွက်အပြင်အဆင်နှင့်တည်းဖြတ်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါစံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းထိုကဲ့သို့သောက HTML / CSS ကိုနှင့်ပုံရိပ်ကို optimization အဖြစ်အချို့သောအခြေခံနည်းပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ဒီဇိုင်းသဘောအရရပါလိမ့်မယ်။
ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်းကိုအောက်ပါအတှေ့အကွုံ / စွမ်းရည်ရှိသည်လိမ့်မယ်:
- layout ကိုနှင့်ဒီဇိုင်း၏ခိုင်ခံ့နားလည်မှု။
- Photoshop ကို / Illustrator ။
- InDesign (ကုန်းပတ်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်မွမ်းမံမှုများ) ။
- Image ကိုသင့်မြတ်အောင်လုပ်ကိုင်။
- အတှေ့အကွုံ 0-3 နှစ်ပေါင်း။ အေဂျင်စီအလုပ်သင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူမကြာမီကဘွဲ့ရလျှောက်ထားကြိုဆိုကြသည်။
- သင်ကဒီအခန်းကဏ္ဍများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်သင်၏အွန်လိုင်းအစုစုကိုမှ link တစ်ခုတင်ပြရပါမည်။
ဤသည်ကန်ထရိုက်တာများနှင့်ကန်ထရိုက် 41 CFR အ§§ 60-1.4 ၏လိုအပ်ချက်များ (က), 60-300.5 (က) နှင့် 60-741.5 (က) လိုက်နာရလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားစည်းမျဉ်းများမသန်စွမ်း protected စစ်ပြန်သို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအဖြစ်၎င်းတို့၏အဆင့်အတန်းကိုအပေါ်အခြေခံပြီးအရည်အချင်းပြည့်မီတစ်ဦးချင်းစီဆန့်ကျင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတားမြစ်, သူတို့၏လူမျိုး, အသားအရောင်, ဘာသာရေး, လိင်, ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသားရေးဇာစ်မြစ်ပေါ်တွင် အခြေခံ. အားလုံးတစ်ဦးချင်းစီဆန့်ကျင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတားမြစ်။ ထို့အပြင်ဤစည်းမျဉ်းမိုးချုပ်ကန်ထရိုက်တာများနှင့်ကန်ထရိုက်လူမျိုး, အသားအရောင်, ဘာသာရေး, လိင်နှင့် ပတ်သက်. အမျိုးသားမူရင်းမပါဘဲ employ နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကြိုတင်အပြုသဘောဆောင်အရေးယူကြောင်းတောင်းဝါရင့် status ကိုသို့မဟုတ်မသန်စွမ်းကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။
www.dol / gov / ofccp / regs / လိုက်နာမှု / ပိုစတာ / pdf / supplement_English.pdf
လှံ & Arrows 2017-12-31
နောက်တစ်ခု: မန်နေဂျာကို Creative ဗီဒီယို